Akhri: Sababta wariyaal ajnabi a oo looga musaafuriyey Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Sababta wariyaal ajnabi a oo looga musaafuriyey Muqdisho
Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa dalka, gaar ahaan Muqdisho ka musaafurisay labo wariye oo ajnabi ah, kuwaasoo lagu eedeeyey iney dalka soo galeen iyadoo aysan ka warheyn wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
Labadan Suxufi ayaa u kala dhashay dalalka Uganda iyo Ghana, ayaa waxaa Muqdisho keenay Cumar Faaruuq Cusmaan oo ka tirsanaan jiray ururka Saxafiyiinta NUSOJ, waxaana la qorsheynayayey iney Isniintii shalay tababar u furaan saxafiyiin, hase ahaatee waxaa tababarkan joojiyey ciidamada ammaanka Soomaaliya.
Wasiir kuxigeenka Wasaarada Warfaafinta C/llaahi Colaad Rooble ayaa sheegay in Wariyeyaashan ajnabi aanay soo marin Wasaarada, laguna soo wargelin, isagoo ku eedeeyay saxafiyiin badan oo ajnabi ah inay si sharci daro dalka ku soo galaan.
Xoghayaha Guud ee Ururka Suxufiyiinta NUSOJ, Maxamed Ibraahim Bakistaan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan tallaabadan, waxaana uu dhankiisa xusay in aanay soo marin Ururkooda saxafiyiintaas ajnabiga ah.
Ururka Suxufiyiinta NUSOJ ayaa horay u kala jabay, waxaana dowladda Soomaaliya aqoonsatay dhinac ka mid ah, dhinaacaas oo soo dhaweeyey tilaabada lagu musaafuriyey weriyaasha ajnnabiga ah.
Xildhibaano ka dalbaday Nicholas Kay inuu raaligelin bixiyo